ဘောလုံးပွဲရှုံးကြွေးတွေကြောင့် တရုတ်ကောလိပ် ကျောင်သားတဦး (၇)ထပ်တိုက်ပေါ်ကနေခုန်ချသေဆုံး - International - Myanmar Business Directory: Golden Place
ဘောလုံးပွဲရှုံးကြွေးတွေကြောင့် တရုတ်ကောလိပ် ကျောင်သားတဦး (၇)ထပ်တိုက်ပေါ်ကနေခုန်ချသေဆုံး
Jun 27 2014 No Comments
တရုတ်နုိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်ကဒုတိယနှစ် ကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ဟာဘောလုံးပွဲရှုံးကြွေးတွေကြောင့် ၇ထပ်တိုက်ပေါ်ကနေ ခုန်ချသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
လင်းလို့ အမည်ရတဲ့ အဲဒီကျောင်းသားဟာပိုက်ဆံပြန်ဆပ်ပါ့မယ်။ အတင်းအကြပ် မတောင်းပါနဲ့ စသဖြင့် တယ်လီဖုန်းကို ဆယ်မိနစ်လောက် ကြာအောင် ပြောပီး ချက်ချင်းပဲထရပ်လိုက်ပီး ခုန်ချလိုက်တဲ့ အကြောင်းမျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။
အဲဒီကျောင်းသားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်တွေအတွင်း ဆက်တိုက်ဘောလုံးပွဲလောင်းကြေးရှုံးခဲ့တာတွေ ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဒေါ်လာ၃ထောင်ကျော် ရှုံးထားပြီးအတိုးများများနဲ့ အကြွေးတွေ ပါတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်လို့ နောက်ထပ် ကျောင်းခန်းဖေါ် သူငယ်ချင်းတယောက်ကပြောပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရပိုင် ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ထီရောင်းချမှုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကတော့ ယွမ် သန်းပေါင်း ၄ထောင်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆00 ကျော် အထိရောက်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ကမ္ဘာ့ဖလားက ထီရောင်းကြေးထက် ၂ဆလောက်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ တရုတ်မီဒီယာတွေ မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အမြီးပေါက်နေတဲ့အတွက် နတ်ဘုရားအဖြစ် ကိုးကွယ်ခံရတဲ့ အိန္ဒိယဆယ်ကျော်သက်
အိန္ဒိယဆယ်ကျော်သက် ကေ ...
Do you use Gas for c ...
The Hunger Games ဇာတ ...
This is the trickies ...
About Currency Exchange Rates and ATMs in Myanmar Jun 27 2014
လာမဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း နှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့် Jun 27 2014
Software မသုံးဘဲ Folder ကို Lock ချထားရအောင် Jun 27 2014
Telenor Myanmar မှ Sim-Card Distribution အတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ခေါ် Jun 27 2014
Huawei Authorised Service Center မြန်မာပြည်တွင် ပထမဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ် Jun 27 2014
Valentine’s Day Trends in Myanmar: Internet and relations Jun 27 2014
မန္တလေးမြို့ မဟာမုနိ ဘုရားကြီး၏ အနောက်ဘက် ခြေတော်ရင်းဆီက ရိုးရာ ၀ါဆို ခြင်းအလှပွဲတော် Jun 27 2014
Tourism revenues on track to surpass US$1 billion this year Jun 27 2014
စင်ကာပူဈေးဝယ်စင်တာများတွင် ရောင်းချခံနေရသည့် အိမ်အကူများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြန်မာများဖြစ် Jun 27 2014
Colorful Parasols of Myanmar - Pathein Htee Jun 27 2014
Nanmar Myanmar Special Incentive Travels &#...
Road to Mrauk U Travels & Tours
Boo Taw & Brother Travels Co., Ltd
Building 16 ,Room 3, Sapal Street
P: +9597323 6760, +9501122 1135